Tovo J’Hay – Piment Café
Elaela indray tsy nifamotoana tamin’ireo mpankafy azy, tetsy amin’ny Piment Café Behoririka i Tovo J’Hay. Fotoana fanararaotana, araka izany, ny anio, manomboka amin’ny 8 ora alina. Hitondra indray ireo hirany taloha, ampian’ireo vaovao izay namerina ny lazany indray ity mpanakanto ity mandritra ny fiarahana. Fotoana ifanakaikezany kokoa amin’ireo mpankafy, mandra-pahatongan’ny seho goavana manaraka indray io.
Revy Lôlô – Karibotel
Mitohy hatrany ny “Revy Lôlô sy ny tariny” eto an-tanàna, hataon’ireo mpikambana eto an-toerana. Manome fotoana ireo mpankafy izany indray ry Benny, Bebey ary Sammy, anio, manomboka amin’ny 9 ora alina, etsy amin’ny Twenty Six, Karibotel Analakely. Toy ny mahazatra, hanampy azy ireo eo amin’ny tendry gitara i Sefo Nono. Na matetika aza, ilain’ny mpankafy hatrany ny fameloman-dry zalahy ireo hiran’ny Lôlô sy ny tariny ireo.
Samöela – Dôme Ankorondrano
Mbola ao anatin’ny fampahafantarana hatrany ny rakikira “Radio n’Ambanivolo” I Samöela. Hiverina etsy amin’ny Dôme Ankorondrano indray izy sy ireo mpitendry mpanara-dia azy, anio alina. Hipoka hatrany ny toerana nandalovany, itondrany ity rakikira ity, raha ny teto an-dRenivohitra no resahina. Lehibe kokoa ny toerana mba tsy hisy ny hiverim-potsiny, raha ny anio.